Maxaa ka socda dalka Ukraine? - BBC News Somali
Maxaa ka socda dalka Ukraine?
15 Abriil 2014
Image caption Ragga hubaysan ee taageersan Ruushka ee qabsaday magaalooyinka Bariga Ukraine
Dhibaatada ka jirta wadanka Ukrain waxay galaysaa waji cusub oo khatar ah. Taageerayaasha Ruushka ayaa qabsaday saldhigyada Booliiska iyo xarumaha maamulka ee dhowr magaalo oo ku yaala bariga dalkaas.
Waxay dadka qaarkii ku cabireen in ay yihiin dad taageersan wadanka Ruushku waxay kor u qaadday suurto galnimada in ay dawlada Kiev ay jawaab adag ka bixiso.
Taas badalkeeda, waxay siin kartaa masuuliyiinta Ruushku mar-marsiiyo ay ku dhaqaajiyaan ciidamada Ruushka ee ku sugan xadka u dhaxeeya labada dal.
Waxaa laga yaabaa in ay arintani tahay arrin siyaasad un lagu soo badhigayo ama loola jeedo in lagu cabsi galinayo dawladda ku meel gaarka ee Ukraine. Ama waxaa laga yaabaa in loola jeedo wadahadallada afar geesoodka ah ee u dhaxeeya wadamada Ukraine, Ruushka, Maraykanka iyo ururka Midowga Yururb, kaas oo la qorsheeyay in la qabto todobaadkan.
Image caption Obama iyo Putin ayaa isku khillafay arrinta Ukraine
Waxaa laga yaabaa in ay Moscow doonayso in ay xakamayso qaab kasta oo ay wadahadaladu ku dhacayaan.
Si kasta oo ay ahaataba, xaraaradu kor ayay u sii ka caysaa. Xal diblamaasiyeed oo laga gaadho dhibaataduna waxay u muuqataa hada mid ka sii fog sidii hore.
Sidaa daraadeed, maxaa caddaynhaya xogaha NATO iyo hogaamiyayaasha reer galbeedka ee sheegaya in ciidamada Ruushku ay ka samaynayaan hawlgalo qarsoodiya bariga wadanka Ukraine.?
Caddaymaha ka imanaaya baraha bulshada ee internetka, ayaa tusaya in koox raga ah oo aad hubaysan dhar is ku midana ku labisan ay ku lug lahaayeen guryihii ama xarumihii markii hore la qabsaday ee magaalooyin ku yaala bariga wadanka Ukraine
Roger McDermott, waa ni sare oo ka tirsan daraasaadka culuunta Eurasian ee hay'ada Jamestown. Wuxuuna mudo dheer eegayay milatariga wadanka Ruushka.
Qiimaynta uu sameeyay waxa ay tahay, labiska iyo hubku waxa ay tilmaamayaan “ ciidamo aad u qaabaysan oo leh calaamadihii ciidamada gaarka ee Ruushka , ama dhabtii la odhan karo ciidamada sir doonka milatariga ee gaarka ah ama 'Spetsnaz loo looyaqaan'"
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu taxadar ka muujiyay in ay tani tahay oo kaliya, sidii markii hore uu Ruushku hawlgalka uga fuliyay gobolka Crimea.
Image caption Dibedbaxyo lagu taageersan yahay Ruushka ee Bariga Ukraine.
“ Gobalka Crimea “ waxa uu timaamay in ciidamada Ruusha ay caawinaysay arin aad u muhiim ah oo ahaa ol ole aan laga soo hor jeedin oo u sahlay in ay la wareegaan meelihii staratajiyada muhiim ka u ahaa, waxayna ka faaidaysteen tabar darida dawlada Kiev.
Mr McDermott, waxa uu sheegay in ay xaaladu ka duwantahay bariga Ukraine.
“Kooxaha ka tirsan ciidamada gaarka ah oo taageero ka helaya dadka deegaanku waxay qabsan karaan guryaha Istatijiga ah iyo jidadka muhiimka ah laakiin , hadii ay ka jawaabaan ciidamada Ukriane iyo xoogaga amaanku xaaladu kor ayay u sii ka caysaa, waxana dhacaysa in Ruushku uu kaga qayb qaato cidamada caadiga ah oo ay ku jirsan qaybo ka mida ciidamada cirka iyo ciidamada dhuka.” ayuu yiri McDermott.
Ruug cadaa kale oo ka faalooda arimaha milatariga wadanka Ruushka Keir Giles kana tirsan xarunta daraasaadka iyo cilmi baadhista colaadaaha ayaa leh “ waan niyad jabsanaha laakin lama-yaabani” arimahan kor u sii kacaya maalmahan dunbe.
Mar la waydiiyay in uu aaminsan yahay in ay arintani tahay talabo aan qar soo sanyn oo milatariga wadanka Ruushku qaadayo waxa uu ku jawaabay arntani guud ahaanba maa suurtagal.
“Arintan waxay noqondoontaa, ma aha Moscow oo kaliya waqtiga dheen sida ay u sheegi doonto in ay badbaadinayso xuquuqda dadka u dhashay Ruushka ee ku nool wadamada dibada laakiin, waxa ay tahay xigmad ah sidii loo ilaalinlaha amaanka iyo daganaanshaha iyo qaabkii loo wajihi lahaa xadaka Ruushka” ayuu yiri.
Labada nin ee ka faalooday arintan, waxay aaminsan yihiin in dhibaatada ka taagan wadanka Ukriane ay gashay waji halis ah. Waxaan waydiiyay Mr McDermott in u jeedada wadanka Ruushku uu ka leeyayhay arintan dhamaanteed ay cadayd. Run-ahaantii, Ruushku wuxuu qaadanayaa khamaar aad u wayn.
“ Khatartu waxay tahay in ciidamada Ukriane ay la yimaadaan wax iska caabin ka badan tan ciidamada Ruushka. markaasna waxy noqonaysaa arin dheeraata, oo jiidanta, oo fool xun” ayuu yiri.
Laakiin, wuxu intaas ku daray “ hadii ciidamada Kiev ay bur buraan ama ay ku guul daraystaan in ay bixiyaan jawaab dagdaga oo ku filan, Markaas Moscow waxa helaysaa wax ay la shir timaadoo oo ay miiska wadahadalada soo dhigto gorgortanka iyadaa hogaamin doonta. Arinta Amaanka ayaana ah u jeedada laga leeyahay dhibaatadan aloosan. Mid koodna reer galbeedku ma aqoonsa, wadanka Ukraine oo la kala goo-gooyo ama ay buun-buuniso fikrada ah in meel dhaxe la isgu yimaado oo dastuur cusub la qoro dawlad fadaraaha oo tabar darana la sameeyo mustaqbalkana u dhaga nuglaata Kremlin”
Isaga aragatidiisa, Moscow waxa ay doonayso wuu cadyahay. Waxay doonaysaa in wadanka Ukraine laga dhigo Gobolo Fadaral ah iyo in si sharci ah loogu balan qaado in wadanku aanu ku biirayn xulafada NATO.
Image caption Maraakiibka dagaalka ee Ruushka oo ku sugan gobolka Crimea
“Kremlinku waxa uu ciyarayaa arin aad u mihiin ah. wuxuuna aaminsanyahay in uu ku guulaysan karo”
Mid ka mid ka soo horjeeda NATO iyo reer galbeedku waxa aad moodaa in aanay haysanin waxayaabo badan oo ay saamayn ku yeenankaraan xaalada dhulkaas ka jirta. Mr McDermot waxa uu leeyhay reer galbeedka waxaa ku dhacay waxa uu ugu yeeray “argagax ama cabsi istaraarajiyeed”
Wuxuu ku doodayaa in dhibaatadani ay soo shaac bixisay “ tabardarida ka jirta qiimaynta sir doonaka ee Ruuska iyo suurtaganimda kharta ay ku yeelna karto wadamada Yurubta bari.
“ Dadka reer galbeedka ah ee ka faalooda dhibaatooyinka iyo dawladuhuba labaduba way ku guul darasteen in ay sharaxaad ka bixiyaan micnaha ay leedahay in laga hortago in uu gaadho Ruushshku danaha Istararagiyeed ee uu ka leeyahay wadanka Ukraine” ayuu yiri
“Meesha uu ka jiro fikir wanaagsan waxaan aragna oo kaliya niyad jab iyo fadeexad